Malunga nathi -Raymin Display Products Co, Ltd.
Ukuboniswa kukaRaymin kugxile kwi-R & D eyenziwe yaba yeyakho, yokuvelisa kunye nokuthengisa iindawo zokumisa iphepha, iibhokisi zezipho kunye nezinye izisombululo zokubonisa. Ukuza kuthi ga ngoku, sikhonze ngaphezu kwewaka labathengi basekhaya nabangaphandle. Ukusuka ekupakisheni imveliso ukubonakalisa imveliso, sihlala sithatha iimfuno zabathengi njengezona zinto zikhokelayo kwaye sidibanisa inyani yokulungelelanisa inkqubo yokubonisa imveliso eyodwa. Iiodolo ezithengiswa phesheya kolwandle, kuthathelwa ingqalelo indleko zabasebenzi belizwe lomthengi, sikwabonelela ngesicwangciso sokupakisha, ukwenza ngokwezifiso ibhokisi yeplagi, ukhuseleko lwekona kunye nebhodi yamakhadi kwiodolo nganye, ukuqinisekisa ukuba indibano yamacala amathathu umboniso wemveliso emva kokuhambisa Inokufikelela kubathengi abachongiweyo. Izicelo zemveliso ebonelelwe yinkampani yethu zibandakanya iivenkile, iivenkile ezinkulu, imiboniso, iihotele kunye nezinye iindawo zikawonke-wonke. Umboniso weRaymin unyanzelisa ukujolisa ebantwini, ukhuthaza ukutsha, kwaye wenza konke okusemandleni ukubonelela abathengi ngofakelo olufanelekileyo, ukupakisha okusebenzayo kunye nokusebenza ngokufanelekileyo.
Ukujonga kwikamva, iRaymin Display iya kubambelela kwimpumelelo yeshishini njengesicwangciso esiliqili sophuhliso, iqhubeke ukomeleza ukuveliswa kwetekhnoloji, ulawulo lwentengiso kunye nentengiso entsha njengoyena ndoqo wenkqubo yoyilo, kwaye uzabalazela ukubonelela abathengi behlabathi ngopakisho olufanelekileyo kwaye bonisa izisombululo.
Inkcubeko yethu yobumbano
Ukususela ekusekweni kweRaymin Display ngo-2012, imveliso yethu kunye neqela le-R & D likhule ukusuka kwiqela elincinci ukuya kuma-300 + abantu. Indawo yomzi mveliso yandisiwe yaya kwi-50.000 yeemitha zesikwere, kwaye ingeniso kwi-2019 ifikelele kwi-25.000.000 yeedola zaseMelika kwinto enye yokuwa. Ngoku siyinkampani enesikali esithile, esihambelana kakhulu nenkcubeko yenkampani yethu:
1. Inkqubo yokucinga
Umxholo ongundoqo "ujolise ebantwini, umthengi kuqala".
Umsebenzi wobumbano "Yokuphumelela ngokubambisana kunye nenkonzo egqibeleleyo."
2. Iimpawu eziphambili
Yiba nobuchule bokuyila into entsha: Olona phawu luphambili kukuzama ukuba nephulo, ukuba nesibindi sokuzama, ukuba nesibindi sokucinga nokwenza.
Gcina ingqibelelo: Gcina ingqibelelo yeyona nto iphambili kwiRaymin Display.
Ukukhathalela abasebenzi: tyala i-yuan yezigidi ezili-10 ngonyaka kuqeqesho lwabasebenzi, usete ikhandini labasebenzi, kwaye unike abasebenzi izidlo ezithathu ngosuku simahla.
Yenza okusemandleni ethu: Umboniso weRaymin unombono omkhulu, ufuna imigangatho ephezulu kakhulu yomsebenzi, kwaye ulandela "ukwenza zonke izisombululo kwiimveliso ezisemgangathweni.
Ixesha lokuPhuhliswa kweNkampani
2013 Inkampani yafikelela kwisivumelwano neGuangdong Fenggao Printing Technology Co, Ltd. kwaye yaba liqabane layo kwishishini.
2016 Iqela lenkampani i-R & D liphuhlise isisombululo sokuma kwesibini, esithandwa ngokubanzi kwaye samkelwa ngabathengi.
2018 Inkampani ipasile ukuqinisekiswa kweBSCI kwaye yafumana ushicilelo lweDisney kunye nokupakishwa kwemvume yokuvelisa.
2019 Inkampani yazisa ngenkqubo yolawulo lwemibala ye-GMI ukubonelela abathengi ngeenkonzo zokuprinta ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo zokudibanisa imibala ukuqinisekisa ukuba imibala yayo yohlobo ikwimeko entle.
2020 Oomatshini bokuqala bokushicilela aba-3 benkampani, oomatshini abathathu beebhiya ezizenzekelayo, oomatshini abathathu bokuprinta iphepha ngokuzenzekelayo, umatshini opapasha i-CTP o-1, umatshini wokunamathisela o-1, oomatshini bebhokisi yoku-gluing ezenzekelayo, kunye nomatshini wokucheba o-1. Umatshini wokushicilela weinki we-flexo wongezwa kwisiseko.
1. Isakhiwo esiPhucukileyo seFektri: Sinendibano yokusebenzela engaphezulu kweemitha zesikwere ezingama-50,000, exhotyiswe ngemveliso epheleleyo kunye nomatshini wokuvelisa, ukusuka ekushicileleni ukuya kwibhokisi yeglu.
2. Amava: Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yokuvelisa amava kumboniso wekhadibhodi kunye namava asemgangathweni okupakisha iphepha. Sikulungile ekuhlanganiseni nasekupakisheni iimveliso zokubonisa iiracks, ukunceda abathengi ukuba bonge iindleko zomsebenzi ecaleni kwabo.
3. Ukuphicothwa kweZatifikethi: ISO9001, FSC, BSCI, Disney, Walmart
4. Uqinisekiso lomgangatho: Sisebenzisa inkqubo yolawulo lwemibala ye-GMI yokuthelekisa imibala; kwaye usebenzise oomatshini bokuvavanya uxinzelelo lomda kunye namandla aqhekezayo ekhadibhodi.
5.Umxokelelwane wemveliso yanamhlanje: Uqeqesho oluzenzekelayo lwezixhobo zemveliso, kubandakanya izixhobo zemveliso yokumisa, ukwenza ushicilelo, ukunyanga umphezulu, ukunyusa, ukunamathisela kunye nokuncamathelisa.